कुन प्रदेशमा कति संक्रमित, कति संक्रमित डिस्चार्ज भए ? - Nepal News Site
कुन प्रदेशमा कति संक्रमित, कति संक्रमित डिस्चार्ज भए ?
१७ आश्विन २०७७, शनिबार १७:५४
काठमाडौं : संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर १ मा २ सय ४०, प्रदेश नम्बर २ मा ६ सय ११, बागमती प्रदेशमा ६ हजार ८ सय ९३ र गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ८७ जना रहेका छन ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ९ सय ५१, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १४ गरी देशभरी ९ हजार ७ सय ७७ जना रहेका छन । यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार ७ सय ५, प्रदेश नम्बर २ मा ५ सय १८, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३७ र गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ३२ जना रहेका छन ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा १ हजार २ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ३० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय २ गरी देशभरी ११ हजार ५ सय २९ जना रहेका छन । आज २ हजार ४४ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन । आजसम्म प्रदेश नम्बर १ मा ५ हजार ६ सय ५५ प्रदेश नम्बर २ मा १४ हजार २ सय १५, बागमती प्रदेशमा १९ हजार ६ सय ५६ र गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ९९ जना डिस्चार्ज भएका छन ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ९ हजार ३ सय ४६, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार १ सय ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ हजार १ सय १४ गरी आजसम्म ६२ हजार ७ सय ४० जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन । आज आइसियुमा २ सय १४ र भेन्टिलेटरमा ३१ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन ।